Bandow Lagusoo rogay magaalada Xananbuure kadib Shaqaaqo xalay ka dhacday | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Bandow Lagusoo rogay magaalada Xananbuure kadib Shaqaaqo xalay ka dhacday
Bandow Lagusoo rogay magaalada Xananbuure kadib Shaqaaqo xalay ka dhacday
DegDeg-Bandaw habeenkii ah ayaa lagu soo rogay Magaalada Xananbuurre ee Waqooyiga Galgaduud.
Bandawgan oo caawa dhaqan galaya ayaa bilaabanaya halka saac ee fiidnimo ilaa labo iyo tobanka subaxnimo.
Waxa uu yimid kadib shaqaaqo xalay ka dhacdey deegaankaasi oo ka bilaabatey tacshiirad lagu furay gaari nuuca raaxada ah, markii dambena isku badashey gacan ka hadal dhex marey Ciidamada amniga iyo kooxdii rasaasta ku furtay gaariga.
Saraakiisha laamaha Amnigu waxa ay sheegeen in ahy la wareegi doonaan gaadiidkii la arko iyagoo soconaya waxii ka dambeeya halka saac ee fiidnimo, iyagoo intaa raaciyey in bandawgan uu muhiim u yahay dhowrista xabad joojintii hore loo dhex dhigey beelihii hore ugu dagaalamey Deegaankan Xananbuurre.
Boqolaal Askari oo ka tirsan Ciidamada GorGor iyo kuwa Booliiska Federaalka ayaa Deegaankan u jooga Nabad ilaalin, iyagoo mudo dhowr bilood ah kor ka eegayay dhaqan galida xabad joojintii hore loo dhex dhigey beelaha Deegaankan ku dhaqan.
Previous articleciidamada Policeka galmudug oo maxabiis uu kala wareejiayay Qoysas kasoo kala jeeda Cadaado iyo Caabudwaaq
Next articleDegdeg Askari katirsan Policeka Galmudug oo lagu filay Matabaan